Saoly - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Saola)
Teraka: 1079 tal. J.K.
Maty: 1010 tal. J.K.
Asa : * mpanjaka
I Saoly na Saola dia mpanjakan' i Israely teraka tamin' ny taona 1079 tal.J.K. ary maty tamin' ny taona 1010 tal. J.K. Araka ny Testamenta Taloha dia mpajakan' i Israely voalohany i Saoly teo anelanelan' ny taona 1020 sy 1000 tal. J.K. Ao amin' ny Boky voalohan' i Samoela (1Sam. 8-15) ny tantarany. I Kisy avy ao amin' ny fokon' i Benjamina ny rain' i Saoly. Ny vadiny dia i Ahinôama. Ny zanany dia i Jônatana sy i Mikala sy i Isbôseta ary i Abinadaba.
I Davida sy i Saoly
Tamin' i Saoly na Saola nitady ny ondriny very no nifanena tamin' ny mpaminany Samoela. Ny mpaminany Samoela no nanosotra azy ho mpanjaka raha natao ny antsapaka (1Sam. 9-10). Iray volana taorian' izany dia nanafika ny Israelita tao Jabesa tao amin' ny tanin' i Gileada (na Galaada) ny Amônita. Nanagona ny fokon' i Israely i Saoly mba hanavotany ireo Israelita ireo ka nandreseny ny Amônita. Tamin' izay no nanambaràna azy ho mpanjakan' ny Israelita (1Sam. 11.15).
Nanao fanafihana mitohy an' ireo fahavalon' ny Israelita i Saoly, indrindra an' ireo Filistina. Mpiady mahay i Saoly ka maro ny fandresena azony, isan' izany ny tao Mikmasy (1Sam. 13.16-23; 14.1-23). Tsy nanaraka ny didin' Andriamanitra izay nitaky ny hamonoana ny Amalekita (na Amalesita) sy ny fananany anefa i Saoly ka tsy nanatanteraka izany famonoana ny biby fiompy matavy. Nahatezitra an' Andriamanitra izany (1Sam. 15.1-10). Nanalavitra an' i Saoly ny mpaminany Samoela ka nanosotra an' i Davida ho mpanjaka, izay mbola tanora dia tanora sady mpiandry ondry tao Betlehema.
Lasa nalaza i Davida rehefa avy nandresy an' ilay Filistina goavambe tao hoe Gôliata, ka velom-pialonana tsy nitsaha-nitombo noho izany i Saoly. Hitan' i Saoly fa hisakana ny fandovan' ny lahimatoany atao hoe Jônatana ny fanjakana izany lazan' i Davida izany ka nikendry matetika ny hahafaty an' i Davida izy. Nampanambadiny ny zanany vavy i Davida nefa ho takalon' izany dia tsy maintsy niady tamin' ny Filistina zato i Davida (1Sam. 18.20-27). Nandresy i Davida ka lasa vinantolahin' i Saoly nefa nikendry ny hahafaty azy ihany ny rafozany.
Ny nahafatesan'i Saoly sy Jonatana, sary nataon'i Francesco Salviati, taonjato faha-16.
Tamin' ny fiafaran' ny fiainan' i Saoly dia niady tamin' ny Filistina teo amin' ny tendrombohitra Gelbôa (na Gelbôe) izy. Tamin' izany ady izany no nahafaty an' i Saoly sy ny zanany telo lahy. Nanaiky ny maha mpanjaka ny zanak' i Saoly fahefatra, dia i Isbaala (na Isbôseta) aloha ny ankamaroan' ny fokon' i Israely mandritra ny fotoana fohy, avy eo nanao an' i Davida ho mpanjakan' i Israely, araka ny Boky faharoan' i Samoela (2Sam. 2-4).
Fanjakan' i Israely
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Saoly&oldid=1042090"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 13:12
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 13:12 ity pejy ity.